काँग्रेसका थिंकट्यांक निरौला भन्छन्- शेरबहादुर-बाबुराम र सिके राउत एउटै कुवाको पानी खान्छन् — OnlineDabali
Posted on October 22, 2018 by अनलाइन डबली
काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेस निकट बुद्धिजीवी पेशलकुमार निरौला राष्ट्रिय राजनीतिमा नेपाली काँग्रेसको भूमिकाबाट सन्तुष्ट छैनन् । काँग्रेसको थिंकट्यांकको रुपमा स्थापित निरौला नेपाल एसिया अनुसन्धान केन्द्र सिनासका अनुसन्धाता तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय इतिहास विषयका प्राध्यापक पेशलकुमार निरौला लामो समय कांग्रेस राजनीतिमा पनि संलग्न थिए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको स्वकीय सचिवका रुपमा पनि काम गरिसकेका निरौलाले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र विखण्डका नारा लगाउने सिके राउत एउटै शक्तिकेन्द्रबाट परिचालित व्यक्ति भएको बताएका छन् । उनले नयाँ शक्तिका संयोजक डा.बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव पनि बाह्य शक्तिकेन्द्रबाटै परिचालित भएको दाबी गरेका छन् ।
निरौलासँग पत्रकार बिनु पोखरेलले गरेको कुराकानीः
संसारकै शक्तिकेन्द्रहरुले खेल्ने रणनैतिक केन्द्र बनेको छ अहिले नेपाल । यो किन रणनैतिक केन्द्र किन बनेको छ भने, चीन र भारतको समृद्धिका कारण यस्तो भएको हो । कुनै बेला एक्लै संसार हाँकेको अमेरिकाको दाँजोमा अहिले चीन आइपुगेको छ र भारत पनि पछि पछि छ । त्यति मात्र हैन एसियाका बिभिन्न देश मलेसिया, पाकिस्तान जस्ता मुलुकहरु अहिले बिस्तारै समृद्धितर्फ उन्मुख छन् । जनसंख्याका हिसावले भन्नुस वा आर्थिक समृद्धिको हिसावले, एसिया संसारकै भूगोलको केन्द्र भागमा छ । त्यसमा पनि नेपाल रणनैतिक हिसावले मुल केन्द्र बनेको छ । त्यसको कारण भनेको अमेरिका, चीन र भारत नै हो । उनीहरुका स्वार्थका कारण नेपाल सबैको चासोको बिषय बनेको छ । किन भन्दा अहिले यी एसियाका उदाउँदा देशहरु देखेर अमेरिका आतंकित बनेको छ । उ जे जे गरेर भए पनि चीनलाई कमजोर बनाउन चाहान्छ ।
चीनले आर्थिक विकासले विश्वको ध्यान खिचिरहेको बेला चीनलाई कमजोर बनाउने पश्चिमाहरुको एउटै हुक ठोस्ने ठाँउ भनेको तिब्बत नै हो । तिब्बतसँगै नेपाल जोडिएको छ । त्यसैले भारतले अमेरिकाकको सहयोगमा दलाई लामालाई भारतमा ल्याएर पालेको छ । उनीहरु नेपालमा टेकेर तिब्बत हान्ने दाउमा छन् । तिब्बत स्वतन्त्र गरेर चीनलाई कमजोर बनाउने उनीहरुको दाउ छ । पश्चिमाहरुलाई थाहा छ– नेपाल बिना उनीहरु यो काम गर्न सक्दैनन् । त्यसैले उनीहरु चीन कमजोर पार्न नेपालमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन चाहान्छन् ।
कुनै पनि सभ्यताको मुल केन्द्र नै एसिया हो । पश्चिमाहरु एसियन सभ्यता सिकेरै समृद्ध बने, तर एसिया विकसित हुन सकेन । चार हाजार बर्ष पहिलेका हाम्रा सभ्यताहरु सिकेर पश्चिमाहरु समृद्ध बनेका हुन् । यो इतिहास पल्टाएर हेर्दा छर्लङै हुन्छ । अहिले फेरि एसिया त्यही अवस्थामा फर्कदै छ । मतलव समृद्ध हुदैछ । तीन सय बर्ष अगाडिको पश्चिमा हेर्नुभयो भने केही पनि छैन । त्यही बेला हामी सभ्यतासम्पन्न थियौं ।
मुसलमान, इसाई भन्नुस् वा बुद्ध, हिन्दुकै र कन्फुसियसकै कुरा गर्नुस्, बेद भन्नुस वा अरु केही । यी सबै सभ्यताहरुको केन्द्र चाहिँ एसिया हो । एसियालाई सभ्यताहरुको घर भनिन्छ । जनसंख्या नै हेर्नुस् न एसियाको जनसंख्या हटाइदिउँ त यो पृथ्वी नै शुन्य झैं हुन्छ । एसियाको भू–खण्ड हेर्नुस्, एसियाको विविधता हेर्नुस्, प्रजाति देखि लिएर बोट बिरुवा हेर्नुस् । यहाँका जातजाति, धर्मसंस्कृति देखि लिएर विविधताको क्षेब नै एसिया हो ।
तपाईँले बडो सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो । यो अहिले सबैले जान्नु पर्ने बिषय हो । हेर्नोस्, चीन नेपालमा स्थिरता चाहन्छ । किनकि नेपालको अस्थिरतामा नै सधै फ्रि तिब्बत आन्दोलन फष्टाएको छ । उ यो बन्द गर्न पनि नेपालको स्थिरता चाहन्छ र नेपालको समृद्धि र विकास चाहन्छ । विकासको नाममा पश्चिमाहरु नेपालमा घुस्न नसकुन्, यहाँ गरिवी नहोस् । गरिवी भयो भने पश्चिमाहरुको चलखेल बढ्छ भन्ने चीनले बुझेको छ ।
चीन नेपालमा स्थिरता चाहन्छ । किनकि नेपालको अस्थिरतामा नै सधै फ्रि तिब्बत आन्दोलन फष्टाएको छ । उ यो बन्द गर्न पनि नेपालको स्थिरता चाहन्छ र नेपालको समृद्धि र विकास चाहन्छ । विकासको नाममा पश्चिमाहरु नेपालमा घुस्न नसकुन्, यहाँ गरिवी नहोस् । गरिवी भयो भने पश्चिमाहरुको चलखेल बढ्छ भन्ने चीनले बुझेको छ ।
भारतले स्वतन्त्रता दिवस मनाउनुको कुनै अर्थ छैन । जब उसका हरेक निर्णयहरु पश्चिमाहरुबाट अहिले पनि निर्दे्शित छन् भने उ के को स्वतन्त्र मुलुक ? स्वतन्त्र हुने लक्षण भारतमा अहिलेसम्म बिकसित नै भएका छैनन् ।
लर्ड डलौजी जो, अंग्रेज शासक थिए । भारतको एकीकरण गर्न उसको ठूलो हात छ । उनी भारतीय अंगे्रजका शासक थिए । तिनले भारतका साना राज्यहरुलाई एकीकृत गरे र नेपाललाई त्यसको अण्डरमा राख्ने र नेपालमार्फत चीन प्रवेश गर्ने उनको रणनीति थियो । नेहरु नीति भनिन्छ नि, त्यो नेहरुको होइन त्यो लर्ड डलौजीको नीति हो ।
अंग्रेजले ५ सय वटा राज्यहरुबाट एउटा भारत बनाइदिएको हो । भारतीयहरु त्यसमा रहे त्यसैले उनीहरुलाई त्यसको माया छैन जति अंग्रेजलाई छ । नेपाल नेपालीले बनाए त्यसैले नेपालीलाई सधै यसको माया छ । भारतमा अदालतका फैसलाहरु अहिले पनि अंग्रेजीमा नै गरिन्छन् । बहस अंग्रेजीमा हुन्छन् । उ धर्म निरपेक्ष राष्ट्र हो । त्यसैले भारत न भाषाले बाधिएको छ न धर्मले बाँधिएको छ । भारतको राष्ट्रिय भाषा नै २२ प्रतिशतले मात्र बोल्छन् ।
हाम्रो राष्ट्रभाषा ८५ प्रतिशतले बोल्छन् । हामीले अंग्रेजसँग सिन्धुलीगढीमा लडेकै हौं । नालापानीमा लडेकै हौं । नेपाल अंग्रेज युद्धमा लडेकै हौं । त्यति मात्र हैन चिनियाँ साम्राज्यसँग पनि हामीले लेडेका छौं । हामी नेपालीसँग त्यस्तो शक्ति छ जसले हामीलाई स्वतन्त्र रहन र विश्वकै ठूला ठूला शक्तिसँग जुध्न र पराजित नहुन प्रेरणा र साहस मिलिरह्यो । यो शिवको भूमी हो, त्यसैको अध्यात्मको कारणले हामी हिजो पनि बहादुर थियौं र अहिले पनि छौं । यहि शिव शक्तिका कारण हामी चार हजार बर्ष देखि स्वतन्त्र राष्ट्रको रुपमा स्थापित छौं र आजसम्म कसैको गुलाम बनेका छैनौं ।
दास भनेको भौतिक रुपमा मात्र समर्पित हुन्छन् । करवलले मात्र उनीहरु सिक्रीमा बाँधिएर बसेका हुन्छन् । गुलामलाई चाहीँ सिक्रीले बाँध्नै पर्दैन । स्वतस्फूर्त पाउमा परिरहेको हुन्छ । भारत पश्चिमाको गुलाम हो दास होइन ।
यहाँका राजाबादी हुँ भन्ने र दरबारियाले कसैले पश्चिमाको विरोध गर्न सक्दैनन् । नेपाली कांग्रेसले भारतको विरोध गर्न सक्दैन र पश्चिमाको विरोध गर्न सक्तैन । चीनको सर्मथन गर्ने मान्छे त यहाँ नेतृत्व तहमा एकलमै कम छन् । जनता त चीनको सर्मथनमा छ । तर हातमा गन्न सकिने नेता बाहेक अरु सबै चीनको बिरोधमा छन् । यही हेरौं न भारतको नाकाबन्दीलाई कांग्रेसले किन नाकाबन्दी भन्न नसकेको ? यत्रो क्रिश्चियनिटी बढीरहंदा यहाँका पण्डीतहरुले यसको बिरोध गर्न किन नसकेको भन्दा यी सबैले भारतीय धामका अभियान मार्फत पैसा खाएका छन् । पश्चिमाको पनि पैसा खाएका छन्, त्यसैले यि बोल्न सक्दैनन् । यस्तै यस्तै कुरामा हिन्दु सम्प्रदायलाई भुलाएर शिव शक्ति र भक्ति कमजोर बनाउन चाहान्छ पश्चिम । र यहि भीडमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउँछ ।
त्यसैले यसरी हेर्दा जनता र राष्ट्रियस्तरका केही नेता बाहेक अरु सबै पश्चिमाको लगानीले चीनको सर्मथनमा छैनन् । तपाईं अनौठो मान्नुहोला यो सबै कुरा यो अवस्थामा पुर्याउनमा सीके राउत र बाबुराम भटटराई एउटै जुवामा नारिएर आएका छन् ।
हेर्नोस् आज सीके राउत तराई टुक्र्याउने कुरा गरेर पक्राउ पर्दा बाबुराम मानवअधिकार हनन भयो भन्छ । पूर्वराजाले एउटा नागरिकको रुपमा देश एकजुट हुनुपर्यो भन्दा बोल्ने अधिकार छैन भन्छ । को कोसँग जोडिएको छ यसैबाट थाहा हुन्छ ।
माओवादी नेताहरुको ज्यान र धन बचाउनकै लागि मात्र यो सरकार बनेको हो । जसलाई पश्चिमाहरुकै बफादार कांग्रेसले साथ दिएको छ । हेर्नुस् माओबादी मुभमेन्ट भनेकै क्रिश्चियन मुभमेन्ट हो । किनभने माओबादी युद्धकालमा १० वर्षमा ११ हजार चर्च निर्माण भए नेपालमा । तपाईं आफै हेर्न सक्नुहुन्छ जहाँ जहाँ माओबादीका संगठन थिए त्यहाँ त्यहाँ चर्च बनेका छन् । उनीहरुले जहाँ जहाँ आक्रमण गरे हिदुत्व सखाप पार्र्नेगरी अक्रमण गरे । स्कूलस्कूलमा संस्कृत नपढाउन उर्दी जारी गरे । पुराण भन्दै गरेका पण्डितहरुलाई ल्याएर उधोमुन्टो बनाएर जिउँदै गाडे । संस्कृत पढाउनेलाई गोली ठोके । संस्कृतका महत्वपूर्ण ग्रन्थ जलाए । पृथ्बीनारायण शाहमाथि आक्रमण गरे । उनले निर्माण गरेका सबै कुरा भत्काए । किनकि उनीहरुलाई त्यसै गर्न लगाएका थिए पश्चिमाहरुले । पैसा पाए बापत माओवादीले पनि अह्राएको गरे ।
भारतीय झण्डा ब्रिटिशले बनाइदिएको हो । उसको भाषा अंग्रेजी हो, शिक्षा अंग्रेजी हो, उसको औद्योगिकरण र अहिलेको रेल सबै अंग्रेजले बनाएको हो । भारतीय कांग्रेस ब्रिटिशहरुले स्थापना गरिदिएको हो । कसैलाई अनौठो नलागोस् एउटा राष्ट्रका लागि हुनु पर्ने गुणहरु हाम्रो जति पनि छैन भारतमा ।
ती कसरी फरक हुन्छन् जो एउटै कुवाको पानी खान्छन् । बुझ्ने कुरा यहि हो । हिजो कस्तो मोडमा उनी तराईमा सिके राउतलाई साथ दिन पुगेका थिए । सिके राउतलाई नेपालमा स्थापित गराउने नै बाबुराम हुन् । अनि हेर्नोस् आज सिके राउत तराई टुक्र्याउने कुरा गरेर पक्राउ पर्दा बाबुराम मानवअधिकार हनन् भयो भन्छ । पूर्वराजाले एउटा नागरिकको रुपमा देश एकजुट हुनुपर्यो भन्दा बोल्ने अधिकार छैन भन्छ । को कोसँग जोडिएको छ यसैबाट थाहा हुन्छ नि । सिके राउत पक्राउ पर्दा प्रचण्ड र बाबुराम दुबैले मानवअधिकार हनन् भयो भनेर विज्ञप्ति निकालेको देख्नु भएन ? यी तीनैजना पश्चिमाका पाल्तु कुकुर जस्तै हुन् । जो एउटै स्वरमा भुक्छन् ।
त्यसैले न प्रचण्डले सिके राउतलाई पक्रन्छन् न बाबुरामले सिके राउतको बिरोध गर्छन् । पश्चिमाहरु जुन रुपमा जनजातिमा आन्दोलनका नाममा खर्च गरे त्यो रुपमा नेपालका जनजाति समुदाय उनीहरुको पछि लागेनन् । त्यसैले अहिले सम्पूर्ण रुपमा तराईमा त्यो शक्ति केन्द्रित छ । त्यसमा माओबादी हिजो जसरी लागेको थियो अहिले काग्रेस पनि सँगै लागेको छ । यसमा दरबारका मान्छे पनि फसेका छन् । त्यसैले यो अन्तिम हो । यो राष्ट्र पीडामा छ । त्यसैले सम्पूर्ण राष्ट्रबादी शक्ति एक ठाँउमा आएर देशलाई ती जल्दादहरुबाट निकाल्नु पर्छ ।
पश्चिमाहरु त आफ्ना एजेण्डामा हिंडाउने हुक खोजिरहन्थे । नेपाली कांग्रेस जस्तो पुरानो पार्टीमा उनीहरुको प्रभुत्व राख्न यो सजिलो उपाय थियो । त्यसै अनुरुप यो बिबाह एक अध्याय हो । नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस २००३ सालमा स्थापना भयो । माथि सेतो तल निलो र सबै भन्दा तल पहेंलो भएको झण्डा थियो । यसको मतलव सेतो माथिको हिमालको रङ, निलो पहाडको जंगल र पहेलो तराईमा झुलेको धानको संकेत चिन्ह थियो । अनि माथि पशुपति र गुह्येश्वरीको चित्र राखिएको थियो । बीचमा उदाउदो सूर्य थियो । त्यो झण्डाले नेपालको संस्कृति बोकेको थियो । नेपालको सिंगो राष्ट्रलाई जोड्ने कुरा थियो । उदाउँदो सूर्यले देशलाई नयाँ युगमा लैजाने संकल्प बोकेको थियो, नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसले ।
केपी ओलीसँग मेरो प्रत्यक्ष सम्पर्क र चिनजान छैन तर, उनले चीनसगँग गरेको सम्झौताले भूराजनीति नै फेरिदिएको छ । यसले एक हदसम्म हामी विकासको सिंढी चढेका छौं । अब यसलाई विकसित रुप दिंदै अघि बढ्न सके हामी लेपालीले यसरी हाम्रो सार्बभौमिकता खोसियो भनेर हारगुहार गर्नुपर्ने छैन ।